Arịrịọ a na-arịọ Nwanyị Anyi nke Medjugorje ka ọ kwuo taa June 25 | EKPERE NA OZI
Arịrịọ na Nwaanyị nke Medjugorje ịrịọ taa June 25th
AKW TOKWỌ NIILE NA-EGO NSO
Nwanyi nne nke Chukwu na nne anyi maria, Nwanyi Udo, anyi n’eto gi n’eto ma kelee chineke nyere gi anyi dika ezigbo nne anyi Onye n’egosi anyi uzo udo na nzoputa anyi, dika Nwanyi Nwanyi inwetara anyi n’aka Onyenwe anyi. ngwongwo nke udo na mkpezi. N'ọtụtụ ụzọ ị na-agwa anyị okwu, chebe anyị ma na-arịọchitere anyị arịrịọ, jirikwa ịhụnanya gị hụ nne gị, ị meriri obi ụmụ gị na-emehie emehie ka ị duru ha Ọkpara Jizọs. Dịka n’ime obi nne gị, Meri, enwere ohere maka ụmụ gị niile, ọ sọkwara ndị na-akụ obi gị site na ị tụfuo onwe gị na mmehie, yabụ ịhụnanya anyị nwere ike ịnabata ụmụnna, n’agụnyeghị onye ọ bụla, ma bụrụkwa ndị arịrịọ na mkpuchi mmehie maka nke ha. Onyinye ọma nke ị, Nne, kuziri anyị n’ekpere ịnabata ma dị ndụ, nwere ike ijikọ ụmụ gị. Kwado anyị, O Kachasị Nsọ nwanyị, na ntinye nke ntughari na nke ido anyị nsọ n'ihi na, site n'enyemaka gị, anyị ji merie onye iro nke mkpụrụ obi anyị na mmadụ site n'ekpere, itinye aka na oriri nsọ, ibu ọnụ, ọrụ ebere na mkpebi ọhụrụ. Chukwu. Ka obi obi oma anyi na ndu anyi nile buru aja nke Ubara na obara nke Jisos Kraist, Okpara gi na onye nzoputa anyi. Anyị chọrọ ịnabata ya ugboro ugboro na ekele na Njikọ Nsọ, iji fee ya ofufe n'ezie ugbu a na Sakrament gọziri agọzi ma mezie, ya na okwukwe na ịhụnanya, mmehie nke o mejọrọ. Bụrụ nwanyị, Meri, “nwanyị dị nsọ”, onye ndu anyị n’idozi ife Chineke ụbọchị niile nke ndụ anyị, na -eme ụzọ ndụ Kraist bụrụ ihe omume ndụ anyị. * Obe nke Onye-nwe-anyị, osisi nke Ndụ, bụrụụrụ anyị nzọpụta, ido-nsọ na ịgwọ ọrịa; na-atụgharị uche na ihe omimi ya na nsọpụrụ, ọ na-eduga anyị isonye na mgbapụta mgbapụta nke Kraịst, ka e wee nye Chineke otuto site na obe anyị. Anyi choro ibi ndu anyi nye gi, gi nwanyi di njo, jikota onu na obi gi nke nne na nzuko nke ndi mmadu. Anyị chọrọ, ọkachasị na ekpere nke Holy Rosary, ịrịọ arịrịọ maka udo ma si otu a nyefee ndụ anyị, ezinụlọ anyị na mmadụ niile. Nne nke Okwu ahụ mere mmadụ, ị nyere anyị Kraist, Wayzọ Anyị, Eziokwu na Ndụ. Ọ na-eduzi anyị, na-eme ka anyị mata ihe ma na-agwa Okwu ya na Okwu Ya, yabụ anyị chọrọ idowe Okwu nke Chineke n'ebe ana - ahụ anya dịka ọnụnọ nke ọnụnọ ya na ọkpụkpọ oku a na-agụ mgbe niile iji gụọ na, dịka ọmụmaatụ gị, Mary , n’ebe kacha mma n’obi anyị idobe ya, tụgharịa uche na ya ma tinye ya n’ọrụ. O Mary, Nwanyị Nwanyị Udo, nyere anyị aka ibi ndụ nke udo, ka "bụrụ udo", ịrịọ arịrịọ na mgbaghara mmehie nke udo nke ụka na nke mmadụ, ịgba akaebe na inye ndị ọzọ udo. Ka anyị k'anyị mee udo nke udo. Nwanyi nke nzukota onye n’ariri aririo a n’ekpe gi, juo anyi na onyinye onyinye nke Mmuo Nso maka nzuko a, ka anyi wee hu otu ya, otu obi na nkpuru obi n’ime Kraist, n’etiti gi na ya. onye na-anọchi Pita onyeozi, ịbụụrụ onye na-eme ka mmadụ na Chineke dị ná mma na mmekọrịta ịhụnanya ọhụrụ. Site na itinye onwe anyi ibi ndu dika ochicho obi obi nne gi si di, ibinye Chineke uzo na ndu anyi, anyi ga aburu “aka esetiri” n’ebe uwa n’ekweghi ekwe di ka o mepere onyinye nke okwukwe na ihunanya nke Chineke. Kedu ka anyị ga-esi ghara ịdị na-ekele gị, Meri, maka ekele niile nke ndụ ọhụụ na Chineke na Udo nke Onye-nwe na-eme ka anyị gafere gị, na-eso gị na mgbapụta mgbapụta ya. Daalụ, nne na eze Udo! Ka ngozi nne gi, Mary, nne anyi di nma, gbadata onye obula n’otu, na ezinulo anyi, (n’ulo ndi uka anyi, Community Marian, Oasis of Peace), n’elu uka na mmadu nile. N’aha nke Nna na nke Okpara na nke Mmuo Nso.
Arịrịọ a ka onye ọbụla nke gbasoro oku nke Nwanyị Nwanyị Udo, nwere ike ikpe. N'ime ya ọ nwere ike ịchọta "ihu" nke ya dịka nwa nwoke / nwa nwanyị nwanyị nke Mary Queen nke Udo ma mekwaa nkwa ime mmụọ ya dị ka mkpa ịzaghachi maka receivedhụnanya sitere n'aka nne Meri. Na Community nke Sardinia, a na-ekpe ekpere a na-ekpe ekpere maka nchekasị na Satọdee mbụ nke ọnwa yana akụkụ bụ isi nke usoro nraranye nye Jizọs site n'aka Meri nke St. Louis M. Grignon nke Montfort. O bu Fada Davorin Dobaj dere nke ndi otu Marian Community Oasis of Peace na Ussana (Ca).
Nke gara aga Post Gara aga post:June 25, 2020 bụ afọ 39 nke ngwa Medjugorje. Nso iketịbe ke akpa usen itiaba?
Next Post → Post ozo:Jutta gọziri agọzi nke Thuringia, Saint nke ụbọchị nke June 25th